Enweghị usoro na-achịkwa nwere pụrụ ịbịa n'ọtụtụ ụzọ na ike ga-eji na-amụ ọtụtụ iche nke omume. Ma, mgbe ha isi, enweghị usoro na-achịkwa nwere anọ isi Efrata: mbanye nke sonyere, randomization nke ọgwụgwọ, nnyefe nke ọgwụgwọ, na-amata ọtụtụ esi. The dijitalụ afọ adịghị agbanwe isi ọdịdị nke experimentation, mana ọ na-eme ka ha mfe logistically. Dị ka ihe atụ, n'oge gara aga ọ bụkwanụ ya abụrụ siri ike tụọ omume nke ọtụtụ nde mmadụ, ma na ugbu a na routinely eme na ọtụtụ digital usoro. Na-eme nnyocha na-enweghị ike chepụta otú njikota ndị a ohere ọhụrụ ga-enwe ike na-agba ọsọ nwere na ndị gaghị ekwe omume na mbụ.
Iji mee ka a niile a bit ọzọ ihe-ma ndị ihe nọrọ otu na ihe agbanweela-ka-atụle Michael Restivo na Arnout van de Rijt si (2012) . The na-eme nnyocha chọrọ ịghọta mmetụta nke n'ịgba ndị ọgbọ ụgwọ ọrụ on isiokwu onyinye iji Wikipedia. Karịsịa, ha mụsịrị banyere mmetụta barnstars, ihe nrite ahụ ọ bụla Wikipedian nwere ike inye ndị ọ bụla ọzọ Wikipedian ikweta ọrụ ike na ya ruru ịdị uchu. Restivo na van de Rijt nyere barnstars 100 kwesịrị Wikipedians. Mgbe ahụ, Restivo na van de Rijt esoro na nnata 'ụdi onyinye iji Wikipedia na-esote ụbọchị 90. Juru ha nnọọ anya, ndi ahu nke ha ọdịda barnstars yiri ka o mee ole na ole edits ke ama ọkọbọ otu. Ndị ọzọ okwu, ndị barnstars yiri ihe a ga-akụda kama na-agba ume onyinye.
Ọ dabara nke ọma, Restivo na van de Rijt na-adịghị na-agba ọsọ a "perturb na-edebe" nnwale; ha na-agba ọsọ a enweghị usoro na-achịkwa nnwale. Ya mere, na mgbakwunye na ị na-ahọrọ 100 n'elu nkwado na-enweta a barnstar, ha na-ẹmende 100 n'elu nkwado na onye ha na-enyeghị a barnstar. Ndị a narị jere ozi dị ka a akara otu, na onye nwetara a barnstar na-adịghị kpebisiri ike na-enweghị usoro. Mgbe Restivo na van de Rijt-ele anya na akara ìgwè ha hụrụ na ọ bụ ihe nkpoda dobe na onyinye oke. N'ikpeazụ, mgbe na-eme nnyocha e jiri ya tụnyere ndị na ọgwụgwọ otu (ie, natara barnstars) na ndị mmadụ na-achịkwa ìgwè, ha chọpụtara na barnstar mere editọ na-eme ihe 60% ọzọ. Ma, a na-abawanye na onyinye na-ewere ọnọdụ dị ka akụkụ nke mkpokọta ojuju na ìgwè abụọ.
Dị ka ọmụmụ a na-egosi, na akara otu nwere bụ oké egwu n'ụzọ na-bụ dịtụ paradoxical. Iji kpomkwem tụọ mmetụta nke barnstars, Restivo na van der Rijt kwesịrị idebe ndị na anataghị barnstars. Ọtụtụ mgbe na-eme nnyocha na-bụghị maara na nnwale anaghị enwe ekele maka ịrịba uru nke akara otu. Ọ bụrụ na Restivo na van de Rijt enweghị a akara otu, ha gaara adọrọ mmasị kpọmkwem na-ezighị ezi. Control iche iche dị oké mkpa nke na CEO nke a isi cha cha ụlọ ọrụ kwuru na e nwere naanị ụzọ atọ na ọrụ nwere ike chụọ n'ọrụ si ya ụlọ ọrụ: na-ezu ohi, na iyi egwu mmekọahụ, na-agba ọsọ nnwale na-enweghị a akara otu (Schrage 2011) .
Restivo na van de Rijt si ọmụmụ na-egosi na anọ bụ isi Efrata nke nnwale: mbanye, randomization, aka, na a ga esi. Ọnụ, anọ ndị a Efrata ekwe ọkà mmụta sayensị na-akpali n'ofè correlations na tụọ causal mmetụta nke ọgwụgwọ. Kpọmkwem, randomization pụtara na mgbe i tụnyere a ga esi maka ọgwụgwọ na ịchịkwa iche iche ị ga-esi enyocha ihe causal mmetụta nke na enyemaka ahụ maka na set nke ndị keere òkè. Yabụ, na a enweghị usoro na-achịkwa nnwale ị pụrụ ijide n'aka na ọ bụla iche iche na a ga esi na-kpatara aka na ọ bụghị a confounder, a na-ekwu na m na-eme kpọmkwem na ụzụ Odide Ntụkwasị iji ike a ga esi kpuchie ya.
Tụkwasị n'ịbụ a mma n'ihe atụ nke na-arụzi ụgbọala nke nwere, Restivo na van de Rijt si ọmụmụ na-egosikwa na ndị lọjistik nke dijitalụ nwere ike ịbụ nnọọ iche na analọg nwere. Na Restivo na van de Rijt si nnwale, ọ dị mfe na-enye barnstar onye ọ bụla nọ n'ụwa na ọ bụ mfe soro ya pụta-ọgụgụ nke edits-ihe karịrị ogologo oge (n'ihi na edit akụkọ ihe mere eme na-akpaghị aka dere site Wikipedia). Ikike a napụta agwọ ọrịa na tụọ a ga esi ọ na-eri bụ qualitatively n'adịghị nwere n'oge gara aga. Ọ bụ ezie na ihe a abuana mmadụ 200, ọ gaara agba ọsọ na 2,000 ma ọ bụ 20,000 ndị mmadụ. Ndị isi ihe na-egbochi eme nnyocha si egbuke gburugburu ha nnwale site a na-akpata nke 100 na-eri, ọ bụ ụkpụrụ ọma. Ya bụ, Restivo na van de Rijt achọghị inye barnstars ka onye na-erughị editọ na ha achọghị ha nnwale mere itisasị Wikipedia obodo (Restivo and Rijt 2012; Restivo and Rijt 2014) . Ya mere, ọ bụ ezie na nnwale nke Restivo na van de Rijt dịtụ mfe, ọ na-egosi n'ụzọ doro anya ihe ụfọdụ banyere nnwale nọrọ otu na ụfọdụ agbanweela. Karịsịa, bụ isi ezi uche nke experimentation bụ otu ihe ahụ, ma ndị lọjistik agbanwewo. Next, iji ihe doro anya na-anọrọ ohere kere mgbanwe a, Aga m tụnyere ndị nwere na-eme nnyocha nwere ike ime ugbu a ka di iche iche nke nwere na e mere n'oge gara aga.